i-worm drive gearbox, umhlangano we-worm gear box, i-worm gearbox
i-worm drive gearbox umakhi we-gearmotor
I-Worm Gear Set
Ama-gearbox wethu ashayela izimpethu akhiqiza i-torque efinyelela ku-420Nm futhi amamodeli amaningi afaka i-lash30 arc-minutes backlash. Ufuna ama-Aluminium Worm Gearboxes?
Ibhokisi elincane lezibungu
Sine-ejensi yejubane le-worm ukuhlangabezana nezidingo zakho. Ukuhambisa okusheshayo kanye nebhokisi le-worm yekhwalithi kusuka kuTrque Transfer. Khetha ibhokisi lamagiya eliyi-worm drive yephrojekthi yakho.
Umhlangano webhokisi le-Worm gear
Ngezivinini zokufaka ze-1000 noma i-1500RPM, ngokuya ngesivivinyo sempilo, isinciphisi sesivinini segiya lesibungu siyatholakala ngosayizi wohlaka lwama-26 ngamanani asukela ku-5: 1 kuye ku-60: 1. ijubane ibhokisi lokunciphisa igiya kanye nomhlangano webhokisi lamagiya wesibungu.
I-Sogears 'worm drive gearbox ikakhulukazi i-Aluminium Alloy, isethelwe igiya elilodwa lesibungu.
i-worm gearbox ifinyelela isilinganiso esiphakeme sokunciphisa isivinini kusuka
I-3: 1 gearbox kuya phezulu, sinentengo ebest yomhlangano webhokisi lamagiya wesibungu kusuka kumkhiqizi, webhokisi lamagiya elincane lesibungu no-gearbox omkhulu, amagiya ezikelemu ezindlini enziwe ngeTin (Stannum) Bronze, uhla olukhulu lwamagiya ajwayelekile & akhethekile wezibungu setha, i-Right Angle Cast Iron worm gear reducer, i-Varitron worm gear speed reducer base base eminyakeni eminingi yokuhlangenwe nakho isebenzisa amazinyo aklanyelwe ngokusebenza kokudluliswa kwe-torque okungenakuqhathaniswa.
Ijubane lejubane le-Worm gear
I-Worm drive gearbox
I-Worm drive motor
I-compact worm gearbox
Izici zokushayela kwesibungu
Ububi be-worm drive bufana nokunye ukudluliswa kwamagiya (ama-gearred reducers) nawo ayizindlela ezifana nokugoba, ukugqoka, ukunamathisela ubuso bamazinyo nokuphuka kwamazinyo egiya lesibungu. Phakathi kwabo, i-pitting ne-worm gear surface tooth egqokwa yizona ezivame kakhulu. nokunamathisela nakho kwenzeka kwesinye isikhathi. Ukukhubazeka okungenhla kwenzeka ikakhulukazi ngoba i-worm eshayela i-gearbox enejubane lemoto phakathi kobuso be-meshing flank inkulu, ikakhulukazi ku-cylindrical worm drive, i-engeli yokugcoba engu-8 incane kakhulu, nefilimu kawoyela elinamandla alikwazi ukwakhiwa, ukuze ukusebenza kahle kokudlulisa kuyehla lapho izinga lokushisa likhuphuka.
Sine ngaphezu kwe-100 onjiniyela abasebenza kakhulu kwe-worm drive gearbox ezobuchwepheshe ukwenza isiqiniseko sokuthi singanikeza isisombululo esifanele sezicelo ezingenakubalwa. Ngaphandle kwezinhlobo ezejwayelekile zomhlangano webhokisi le-worm, singanikela futhi ngenkonzo eyenziwe ngokwezifiso zakho ngokuya ngezidingo zakho ezithile.
Sinikeza wonke amabhizinisi embonini ulwazi olujulile lwesizinda nezinhlelo zokusebenza ezakhelwe inhloso eziklanyelwe amabhokisi egiya lama-worm ukufeza izidingo zakho.
Abasebenzisi bokugcina, Uma udinga isixazululo esiphelele sokuhambisa imboni esiphelele, esinobunye nesisebenza kahle, sicela ufike kithi;
Abathengisi, lapho udinga umenzi onokwethenjelwa onekhwalithi enhle nensizakalo ephelele, sicela uze kithi.
I-20 + Iminyaka
Ukusebenza Okuphezulu Kwizimboni Eziningi, Nge-Zero backlash Gear ukwenza kahle nangaphezulu ukuze wehlise izindleko zakho zokushayela.
Kuyashesha Futhi Kuyasebenza
AmaSogears ahlinzeka ngeminikelo eyahlukahlukene yamakhasimende weTransmission & Distribution. Bheka izinciphisi zethu zamagiya ezikelemu ezikhethekile.
Umkhakha Ohamba phambili
Ama-Sogears anika i-advanced worm drive gearbox esezingeni eliphakeme, idrayivu eshayela nge-motor, impilo ethuthukisiwe nenwetshiwe, Ithimba lethu lenkonzo lizoklama insiza yegumbi eliphezulu yomhlangano webhokisi.
Sineqembu elinamandla kakhulu lokuthenga eligcina ikhwalithi ephezulu kakhulu yezingxenye ezinjengokuthwala, uphawu lukawoyela, izikulufa ngazo zombili ikhwalithi enhle nezindleko zokuncintisana.
Sijabulile Ukuxhumana Nawe Noma Inini.